Zavatra 4 mety tsy fantatrao momba ny fahafatesan'i Chris Benoit nampalahelo - Wwe
Zavatra 4 mety tsy fantatrao momba ny fahafatesan'i Chris Benoit nampalahelo
Tamin'ny 24 Jona 2007, niova mandrakizay ny tontolon'ny tolona matihanina. Chris Benoit, izay iray amin'ireo mpiady mahery indrindra sy hajaina indrindra ao amin'ny indostria, dia hita faty tao an-tranony tany Georgia. Nandefa onjampeo erak'izao tontolo izao io zavatra hita io ary nibahan-toerana tamin'ny haino aman-jery mahazatra nandritra ny volana maromaro.
Ny valim-panadihadiana momba ny fizahana dia nampiseho fa namono ny vadiny ny vady aman-jaza 40 taona ny zoma alina, ny zanany ny ampitso maraina ary namono tena ny alahady teo. Ny tatitra dia milaza fa ny vadin'i Benoit, Nancy, dia hita niampatra teo amina farihy nandriaka lamba famaohana lamba famaohana raha hita faty teo am-pandriany i Daniel zanany lahy.
Ny antsipiriany mahatsiravina amin'ity tranga mampivadi-po ity dia naharatsy saina ireo mpankafy tolona manerantany, saingy mbola misy ihany ny fahamarinana tsy dia tsara laza momba ny fahafatesan'i Benoit izay hatolotro anao anio.
# 4 Benoit dia simba ny ati-doha
Benoit sy ny fianakaviany dia nonina tany Fayetteville, Georgia.
Araka ny fizahana ara-pitsaboana nitranga taorian'ny voina dia nanamarina ireo manam-pahaizana fa «simba be ny ati-doha» nataon'i Benoit, ary nilaza fa nitovy tamin'ny toetran'ny marary iray tany Alzheimer '85 taona lasa ny ati-dohany.
Ny fahasimban'ny ati-doha, amin'ny tranga maro, dia mety ho fanazavana ny soritr'aretina toy ny herisetra tsy ilaina, ny fahaketrahana ary ny fihetsika tsy milamina. Fantatry ny besinimaro fa ny fifandonana dia mety hiteraka fahasimban'ny ati-doha, ary maro ny sakaizan'i Benoit taloha no nilaza fa nanana fitondran-tena tony tamin'ny ratra tamin'ny tolona izy.
Heveriny ho voninahitra ny mitolona isaky ny alina, na maratra na tsia. Taty aoriana dia voamarina fa ny taolana ati-doha simika ao amin'ny vatany dia tsy mifandray amin'ny fampiasana steroid.
# 3 Ny fahafatesany dia nanova ny politikan'ny fahasalamana WWE
Benoit dia nitolona 22 taona tamina orinasa maromaro.
adala hatter nalaina avy Alice in Hafakely
Loza ho an'ny ekipan'ny PR WWE ny voina ary namiratra fahazavana ratsy mivantana tamin'ny fitsapana zava-mahadomelina diso nataon'ny orinasa. Izy io dia nanery an'i WWE handray am-pitandremana kokoa ny politikan'ny Wellness amin'ny alàlan'ny fiheverana tsy ny fiantraikany amin'ny fahasalamana ihany, fa ny fahalemen'ny saina ihany koa.
Ny fiadanam-poan'ny Superstar dia nasongadina bebe kokoa, tamin'ny alàlan'ny fikarakarana manokana. Ny valin'ny autopsy dia nampiseho fa ny vatan'i Benoit dia misy folo heny amin'ny haavon'ny testosterone testosterone mahazatra na dia eo aza ny fizahana ny fitsapana ny steroid WWE 3 volana talohan'izay.
Ny famotopotorana ihany koa dia nanambara fa ny fony dia avo telo heny noho ny tokony ho izy; mety ho maty izy tao anatin'ny folo volana ho avy na inona na inona.
tokony tsy hiraharaha azy ve aho mba hisarika ny sainy
Fantatrao ve fa ny mpihetsiketsika ankehitriny dia folo heny mety maty alohan'ny faha-60 taonany noho ny mpilalao NFL? Fa maninona Noho ny tsy fitandremana mahasoa sy ny fikorontanana tsy tapaka. Izany fahafatesany izany dia nanery an'i WWE handray am-po mafy kokoa ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina ary hanaovana fitsapana mahery vaika kokoa.
inona no dikan'ny hoe mangatsiaka fo
ahoana no hisarahana aorian'ny fifandraisana lava be
ny fomba hanampiana olona manana olana amin'ny fanoloran-tena
manjary romana indray ve ny romana
zavatra horesahina amin'ny olona vaovao